Wararkii U Dambeeyay Iyo Khilaaf Cakiran oo Ka Dhex Istaadhmay Boqortooyadda Reer Aala Sucuud | Baligubadlemedia.com
Wararkii U Dambeeyay Iyo Khilaaf Cakiran oo Ka Dhex Istaadhmay Boqortooyadda Reer Aala Sucuud
Iyadoo ay jirto kacdoon caalami ah oo ku aaddan dilka saxafiga Jamaal Khaashuqji, ayaa qaar ka mid ah qoyska reer Aala Sacuud waxay billaabeen kacdoon ka dhan ah in la difaaco dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, sida ay Reuters u xaqiijiyeen ilo ku dhow dhow boqortooyada.
Daraasiin dhaxal sugayaal ah iyo kuwo ilmo adeeryaal ah ayaa doonaya inay arkaan isbadal ku yimaada hanaanka boqortooyada, laakiin ma dhaceyso inta uu boqor Salmaan nool yahay. Boqor Salmana oo dhalay Maxamed Bin Salmaan waa 82 jir.
Sidaas oo ay tahay, waxay ka wada hadleen dhamaantood suurtagalnimada xubnaha kale ee qoyska inay xukunka qaban karaan kadib dhimashada Boqor Salmaan, gaar ahaan Axmed Bin Cabdulcasiis oo ah 76 jir la dhashay boqor Salmaan.
Boqor Axmed ayaa ku laabtay magaalada Riyadh bishii October kadib muddo uu ku maqnaa dibadda. Intii safarkaasi uu ku jiray, waxa uu u muuqday mid cambaareynaya hoggaanka Sacuudiga iyo dagaalka ay ka wadaan Yemen, isaga oo u jawaabayay banaan baxayaal ku sugnaa halka uu ka daganaa duleedka magaalada London.
Qoyska reer Aala Sacuud ayaa ka kooban boqolaal amiiro ah. Si ka duwan boqortooyooyinka Yurub, ma jiro qad dhaxal oo degsan oo la maro marka boqor uu dhinta oo mid cusub uu xilka la wareegayo. Sidaas darteed, boqorka cusub waa mid laga wada xaajoodo. Wada xaajoodka noocaas ah ayaa dhabaha u xaadhi karaa in la doorto boqor ka duwan Bin Salmaan.
Saraakiil Mareykan ah ayaa dhowaan tilmaamay inay diyaar u yihiin inay taageeraan in Amiir Axmed oo mudd 40 sano ka badan ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibedda uu noqdo boqorka cusub.
Sababta Amiir Ahmed loo doorbidayo ayaa ah ayada oo la rumeysan yahay inuusan wax ka beddeli doonin is-beddelada dhaqaale ee uu sameeyey Maxamed Bin Salmaan iyo heshiisyadii milatari ee uu galay.
Si kasta oo ay ahaataba, amiiro badan ayaa carredhsan, waxaana ay sugayaan inta uu boqorka ka geeriyoodo, taasi oo xiisad iyo dagala ka dhex qarxin karta boqortooyada reer Aala Sacuud.